चिसोले छालामा हुने समस्याबाट कसरी जोगिने ?
२०७६ कार्तिक २९ शुक्रबार
डा. शिष्टता राजभण्डारी
काठमाडौं - चिसोका कारण मानिसमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न गराउँछ । त्यसमध्ये छालामा हुने समस्या एक प्रमुख समस्या हो । चिसो मौसममा हावा चिसो हुने भएकाले छालामा विभिन्न समस्याहरु उत्पन्न हुने गर्दछ ।
चिसोमा धेरैजसो मानिसहरुमा अनुहार र हात खुट्टा सुख्खा भई फुट्ने वा एलर्जी र सोरायसिस (कत्ला) हुने गर्दछ । छालामा देखिने यस्ता समस्यालाई लामो समयसम्म बेवास्ता गर्दा झन फैलदै जाने सम्भावना धेरै हुन्छ ।
चिसो हावा, शरीरमा पानिको कमी घामको हानिकारक विकिरण, तातोपानिले नुहाउदाँ छाला सुख्खा हुने गर्दछ । छाला सुख्खा भएमा छाला चिलाउने, पोल्ने गर्दछ ।
छालालाई स्वस्थ्य राख्न भ्यालिन, तेल लगायत मोस्चराइजर क्रिम प्रयोग गर्नुपर्छ ।
साबुनको प्रयोगबाट जोगिनुपर्छ
जाडोमा मुहारमा साबुन प्रयोग गर्नु भनेको मुहारको छालाको प्राकृतिक नरमपन रित्याउनु हो। साबुनमा भएको रसायनले मुहारमा लागेको धुलो तथा माटोका कणलाई हटाउनुका साथै मुहारको नरमपन पनि हटाउँछ । त्यसैले साबुनको साटो नरम खालको क्लीजिङ क्रिमको प्रयोग उपयुक्त हुन्छ। नुहाएपछि छालाको पोषणका लागि मोइश्चराइजर प्रयोग गर्नुपर्छ।
जाडोयाममा मुहारमा मोइश्चराइजरलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्नुपर्छ। जाडो मौसममा प्रयोग गरिने मोइश्चराइजर गर्मीमा प्रयोग गरिनेभन्दा बढी प्रभावकारी हुनुपर्छ।
छाला सुख्खा हुन नदिन नरिवलको तेल प्रभावकारी उपचार मानिन्छ । किनकी नरिवलमा फ्याटी एसिड, प्रोटिन तथा विटामिन ‘ई’ पाइन्छ, जसले छालालाई नरम बनाउन मद्दत गर्छ । यसबाहेक, नरिवरमा एन्टी अक्सिडेन्ट तत्व हुन्छ, जुन समग्र स्वास्थ्यको लागि लाभदायक मानिन्छ ।
सुख्खा छालामा एलोभेरा निकै प्रभावकारी मानिन्छ । एलोभेराको मद्दतले चिसो मौसममा छालालाई नरम, मुलायम तथा जीवन्त बनाउन सकिन्छ । यसको प्रयोगले छालाको स्किन टोनमा समेत सुधार आउँछ ।
अंग्रेजीमा ओलिभ आयल भनिने जैतूनको तेल छालाको लागि प्रभावकारी औषधि हो । जैतूनमा भिटामिन लगायतका एन्टीअक्सिडेन्ट तत्व पाइन्छ । छालाको सुख्खापन हटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकोले जैतूनलाई पनि प्राकृतिक मोइस्चराइजर भनिन्छ । जैतूनलाई हल्का तातो बनाएर हात, खुट्टामा लगाइ मसाज गर्नु होस् र करिब आधा घण्टा पछि धुनुहोस् । यसो गर्नाले तपाईंको छाला मुलायम हुन्छ ।
(छाला रोग बिशेषज्ञ डा. शिष्टता राजभण्डारीसँगको कुराकानिमा आधारीत)